ဘယ်လိုအချိန်မှာ Lip Liner သုံးသင့်လဲ ? Lip Liner သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ ? – MyStyle Myanmar
ဘယ်လိုအချိန်မှာ Lip Liner သုံးသင့်လဲ ? Lip Liner သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ ?
Foundation မလိမ်းခင် အောက်ခံ Primer လိမ်းဖို့လိုသလို၊ လက်သည်းဆိုးဆေးမသုံးခင် Base Coat တစ်ထပ်အရင်ခံပေးရသလို Lipstick မဆိုးခင် Lip Liner ဆိုးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မသုံးမဖြစ် မဟုတ်ပေမယ့် Lip Liner သုံးခြင်းက သင့်ရဲ့  နှုတ်ခမ်းကို ပိုမိုကြည့်ကောင်းစေပြီး နှုတ်ခမ်းနီကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ Lip Liner သုံးမလဲ ဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။
1. သင့်ရဲ့  နှုတ်ခမ်းဟာ ပါးလွန်း (သို့) မညီညာတဲ့ နှုတ်ခမ်းမျိုး ဖြစ်နေရင်
သင့်ရဲ့  နဂို နှုတ်ခမ်းအရောင်ထက် တဆင့်ပိုရင့်တဲ့ Pencil Lip Liner နဲ့ နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကို ပုံဖော်ပေးခြင်းက သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ပိုပြီးပြည့်ဖောင်းလာသယောင်ထင်ရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းရဲ့  အပြင်ဘက်ကို Contouring လုပ်ခြင်းကို လုံးဝရှောင်ပါ။
2. သင့်ရဲ့  နှုတ်ခမ်းနီဟာ တောက်ပလွန်းပြီး ရေဓာတ်များတဲ့ Type ဖြစ်နေရင်
ရေဓာတ်များပြီး Glossy ဖြစ်တဲ့ Lipstick တွေဟာ Matte Type တွေထက် ပိုပြီး ပျက်လွယ်ပါတယ်။ သဘာဝ Rose-Toned ရှိတဲ့ Pencil Lip Liner နဲ့ နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကို ပုံဖော်ပြီး နှုတ်ခမ်းတခုလုံးကို Concealer အသာအယာလိမ်းပေးပါ။ Loose Finishing Powder အနည်းငယ် ကို နှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင် ပုတ်ပေးခြင်းက နှုတ်ခမ်းနီ ကို အလွယ်တကူပျက်မသွားစေဘဲ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
3. သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို နောက်တထပ် ထပ်မဆိုးဘဲ တနေကုန်ကြာရှည်ခံချင်ရင်
နှုတ်ခမ်းနီ မဆိုးခင် Pencil Lip Liner ကို သုံးပြီး နှုတ်ခမ်းတခုလုံးကို အပြည့်ဆိုးပေးခြင်းက သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို သိပ်သိပ်လေးနဲ့ လှစေပြီး နှုတ်ခမ်းနီအရောင်မှိန်မသွားဘဲ ကြာရှည်ခံနေစေပါတယ်။
4. Lipstick အစား Lip Liner တမျိုးတည်း သုံးနိုင်ပါတယ်
Matte Lipstick တွေ အစား Lip Pencils ကို လွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်ပါတယ်။ NARS Velvet Matte Lip Pencil ကဲ့သို့ Soft ဖြစ်ပြီး ခဲကြောင်းထူသော ခဲတံကို ရွေးချယ်ပါ။ Smudge Brush ကို အသုံးပြုပြီး Blend လုပ်နိုင်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2019-04-10T22:49:51+06:30March 29th, 2017|မိတျကပျ – Make Up|
ပြိုမတေို့သုံးနကွေ မိတျကပျ Sponge ကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျလို့ရမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ
ခြှေးပေါကျကယျြတာလေး ဖုံးသှားအောငျ မိတျကပျဘယျလိုလိမျးရမလဲ
အသားမဲတဲ့သူတှအေတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ Makeup Step မြား
အလှပွငျဖို့အခြိနျမရှိတဲ့သူတှအေတှကျ အဓိကလိုအပျတဲ့ Cosmetics နဲ့ မိတျကပျပစ်စညျး ၅ မြိုး
မိတျကပျလိမျးတဲ့မိနျးကလေးတိုငျးမှာ ရှိထားသငျ့တဲ့ပစ်စညျး ၅ မြိုး
အသားအရတေိုငျးအတှကျ အဆငျပွပွေီး သုံးလို့လညျးကောငျးတဲ့ Face Powder (၅) မြိုး
သဘာဝဆနျပွီးရှငျးရှငျးလေးနဲ့အရမျးလှတဲ့ Wedding Makeup Look ပွငျနညျးအဆငျ့ဆငျ့